fanontaniana Boeing 787-9
3 taona 3 herinandro lasa izay #70 by Leeh12378
Hi Rikooo ekipa misy mety ho na ianareo, na ny mpandraharaha izay mandray anjara amin'ny ny mahagaga vohikala, famoronana ny Boeing 787-9. Efa mitady ho taona iray, ary izaho fotsiny tsy mahita izay mbola. raha mieritreritra ny fampandrosoana fiaramanidina izany no ho voalohany ny misintona azy.
Tohizo ny asa lehibe izay ataonao.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: regor, danielita
3 taona 3 herinandro lasa izay #79 by Gh0stRider203
Vao nijery ka tsy nahita ny anankiray teo eto, fa izaho kosa hitandrina ny maso ary raha misy zavatra tampoka amin'ny eto, aoka aho ya fantany!
Ny lanitra manga!
Misaotra anareo nandray: 48
2 taona 11 volana lasa izay #211 by Dariussssss
Mety ho tsara kokoa aza raha toa ka afaka manana 787 entana, amin'ny dikan-3 rehetra amin'ny toerana iray. Dia sahy mangataka azy io eto.
2 taona 11 volana lasa izay #216 by JanneAir15
Izany no hevitra tsara!
2 taona 11 volana lasa izay #220 by Gh0stRider203
JanneAir15 nanoratra hoe: Izany no hevitra tsara!
2 taona 11 volana lasa izay #222 by Twicerejected
Angamba miezaka hahazo 787 amin'ny modely tsara kokoa sy VC nakarina
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: danwas
2 taona 1 volana lasa izay - 2 taona 1 volana lasa izay #895 by Josh13215
manavao ny 787 ankehitriny miaraka amin'ny cocknit tena 787 fa tsy 737? Ahoana ny momba izany?
Fanovana farany: 2 taona 1 volana lasa izay by Josh13215. Antony: fahadisoan'ny grammer
Fotoana mamorona pejy: 0.251 segondra